Elomhlaba nele-US e-Australia kulo nyaka - Bayede News
Elomhlaba nele-US e-Australia kulo nyaka
Umuntu ongumlandeli wegalofu kukancane ukuthi engakhohlwa ngokwenzeka emqhudelwaneni obizwa ngokuthi iPresident Cup owawubanjelwa eFancourt Hotel & Country Club Links Course, eWestern Cape, eNingizimu Afrika ngonyaka wezi-2003.
Kulowo nyaka lo mqhudelwano okutholana kuwona i-United States neQembu Lomhlaba njalo emva kweminyaka emibili, waphela zibambene ngamaphuzu ali-17 nhlangothi zombili nokuyinto engajwayelekile.
Emzuliswaneni wokugcina idangabane eliwuTiger Woods owayedlalela i-US lalibhekene no-Ernie Els owayedlalela iQembu Lomhlaba, kwakumele kunqobe oyedwa kubona kodwa kwagcina kuhlwa. Okaputeni bamaqembu bobabili banquma ukuthi umdlalo awuphele kungekho elifuna ukugoba uphondo, uGary Player wayehola iqembu lomhlaba uJack Nicklaus yena ehola i-US.
Umqhudelwano walo nyaka ozobanjelwa eRoyal Melbourne GC, eVictoria e-Australia, uzoqala ziyisi-9 uze usongwe mhla zili-15 kwephezulu.
Okugqamile kulo mqhudelwano walo nyaka ukuthi uWoods uzobe ehola i-US iQembu Lomhlaba lona liholwe u-Els.
UWoods ohlezi endaweni yesi-7 emhlabeni ngokukleliswa uhambela phezulu njengoba emasontweni edlule enqobe iZozo Championship eyayiseJapan. Ukuwina kwakhe lo mqhudelwano kusho ukuthi walinganisa irekhodi likaSam Snead lokunqoba imincintiswayo yePGA Tour engama-82. USnead yena waqopha leli rekhodi ngonyaka we-1965
UWoods osehlinzwe umqolo izikhawu ezine, kulo nyaka uphinde wanqobe i-US Masters okungenye yamaMajors amane kuphela ngonyaka. Kwesobukaputeni uzobe elekelelwa nguFred Couples, uZach Johnson noSteve Stricky.
U-Els oteketiswa ngokuthi u “The Big Easy” wakuleli eqenjini lomhlaba uzolekelelana noK.J Choi, uGeoff Ogilvy, uTrevor Immelman noMike Weir.
Emqhudlewaneni odlule owabangonyaka wezi-2017 owawubanjelwe eNew Jersey, e-United States America (USA), wanqotshwa i-US iholwa phambili uSteve Stricker ngamaphuzu ali-19 kwali-11.
Abadlali ababhekwe ukuthi bagqame kulo mqhudelwano:
UDustin Johnson okleliswe endaweni yesithathu emhlabeni, ube nonyaka omuhle njengoba ephume endaweni yesibili emqhudelwaneni iPGA Championship. KoweMaster Championship waphumela endaweni yesibili nomkhaya wakhe uWoods. Abanye uJustin Thomas okleliswe endaweni yesine noPatrick Cantlay okleliswe endaweni yesithupha emqhudelwaneni wePGA Championship waphuma endaweni yesithathu.
U-Adam Scott odabuka e-Australia amava akhe angalisiza kakhulu iqembu lomhlaba muva nje ukleliswe endaweni ye-15, ngonyaka wezi-2014 wake waba sesicongweni emhlabeni. Useke wanqoba iPGA Tour, i-European Tour ngonyaka wezi-2013 wanqoba iMasters Tournament.
Omunye uLouis Oosthuizen lo mdlali wakuleli wenze kahle kakhulu eminyakeni edlule njengoba enqobe iPGA Tour ne-European Tour, ukleliswe endaweni yama-24.
Iqembu lomhlaba selilonke lithakwe kanje:
UMarc Leishman, uHideki Matsuyama, uLouis Oosthuizen, u-Adam Scott, u-Abraham Ancer, uLi Haotong, uPan Cheng-tsung, uCameron Smith, uJason Day, uJazz Janewattananond, u-Im Sungjae, uJustin Harding, uCorey Conners, uShugo Imahira no-An Byeong-hun.
Iqembu i-US selilonke lithakwe kanje:
UJustin Thomas, uDustin Johnson, uPatrick Cantlay, uXander Schauffele, uWebb Simpson, uMatt Kuchar, uBryson DeChambeau, uTony Finau, uGary Woodland, uRickie Fowler, uPatrick Reed, uTiger Woods, uChez Reavie noKevin Kisner.
Bayede News Dec 6, 2019